SingForYou.net - Chit Thu Way Way
Tags : 84-Chit Thu Way Way-KoBurma
By : KoBurma on Jul 8, 2009
Score: 59 Rating: 4.92 Comments: 20
Chit Thu Way Way's Description
pp01 on Jul 9, 2009 0
Arr tar lut myo sarr gyii UBurma, ko saung tee pyi so tar kyii chin tel byo, webcam nae so bar.. grey gyi kyii chin buu.. Athan ka tawt ayan kaung tel..5star*****
KoBurma on Jul 9, 2009 0
မိတ်ဆက်စာတွေ အိမ်ထဲမှာပြည့် သွားမှာစိုးလို့ ပါ… ဒေါ်ပီပီ...ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…ဒုတိယအပုဒ်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်…ဒေါ်ပီပီ:):D
SCH7677009 on Jul 8, 2009 0
KAUNG PAR TAE MY DEAR BRO...
KAUNG PAR TAE MY DEAR BRO... yay Thanks par byar:)
susannyunn on Jul 8, 2009 0
arr ko gdlo loat ya woo lay naw... bel. nel har g dong .. wall g ko yite pya htar tar lar hin......thu ka lel zoot naw... yote ma myinathan pel kyar ya te ... yote nelz kaw nate sat par own byo...... hehe... 5* for u par arr ko g yel...
susanatwet so ok par tal:) ..ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…ဒုတိယအပုဒ်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်…
winlay on Jul 8, 2009 0
ကောင်းပါတယ်ရှင် ..... အာတာလွတ်မြို့စားကြီးက စောင်းတော်ပိုက်ပြီး လွမ်းတေးကို ဟစ်ကြွေးနေတာပေါ့ ( အဲ , မှားလို့ ) ကိုဘားမားကြီး ... WC နဲ့ဆိုထားတာလား , တေးချစ်သူ အပေါင်းအသင်းတွေက ၀ိုးတို့ဝါးတားပဲမြင်ရတာ ကောင်းဘူး ၊ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ထင်ရှားအောင်ပြမှပေါ့ ... ဟုတ်ဘူးလား ^_^
မိတ်ဆက်စာတွေ အိမ်ထဲမှာပြည့် သွားမှာစိုးလို့ ပါ…ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…ဒုတိယအပုဒ်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်…
shwezin888 on Jul 8, 2009 0
ako yae..bal lo so so bal lo orr orr really good bar tal shin !!! ^_^
KoBurma on Jul 8, 2009 0
၂ပုဒ်လုံးအတွက် စတားစ် ပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မ ရွှေဇင်အိပ်အိပ်အိပ် …
nanwarwarmg on Jul 8, 2009 0
၂ပုဒ်လုံးအတွက် စတားစ် ပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မမဝါ……
maureen on Jul 8, 2009 0
ဘဘကြီး ဦးဗမာ ကလည်း ၀က်ကမ် နဲ့ဆိုပါ...အသက်ကြီးလို့နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးနဲ့ဆိုလည်း ကျွန်တောတို့က အားပေးနေမှာပါ..:P really nice bro...5* for u...
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မ maureen …ညီညီနေနိုင် နေရာအတွက် ကိုကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင် က Ready ပဲ…ဆုပိုပိုအောင် နေရာမှာ maureen က ကူညီရင်OK ပါပဲ…..:):D:P
greenlay on Jul 8, 2009 0
ကိုဘားမားရေ ...လာအားပေးပြီနော် ၊ ဂျူနီယာချစ်ဆွေလေးပါ လား ... ၊ အားပေးချင်လို့ကို....ကြယ်တွေအများကြီးသွားဝယ် ထားတာ ၊ချစ်သူဝေးဝေးထွက်သွားရင် ... လိပ်စာလေးနဲ့ ကက ဖိုးသာပေး ... ကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ပေးမယ်လေ :P :P
philtre on Jul 8, 2009 0
ဟေ့..ကိုဗမာကြီး... ယူ့ ၀က်ကင်က ယူ့နှုတ်ခမ်းမွှေး မရိုက်ပြပဲ.. ဘာကြီးကို ပြထားတာလဲ.. အင်းး... ခင်ဗျားရို့ ဗားရှင်းတွေလဲ အရုပ်မထွက်တော့.. ဒီသီချင်းကိုက ပြသနာရှိလို့ပဲ... မူရင်းမှာလဲ တေးသွားသက်သက်ပဲ.. အဆိုတော်အသံလဲမပါဘူး.. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ဒီသီချင်းကို ဆိုချင်လွန်းလို့ ကျနော်အပ်လုပ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်.. ဦးချစ်ဆွေ ဗားရှင်းပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ ဦးဦးအက်ဒမင်က.. သားဟာကိုမှ မရွေးပဲ...း( ... ကိုဗားမား ဆိုတာ အတော်နားထောင်ကောင်းတယ်ဗျာ.. ကိုတောသားဗားရှင်းလဲ အတော်ကောင်းတယ်..
Taw_Thar_Lay on Jul 8, 2009 0
ကျနော်လဲ ပုံများပေါ်မလား ဆိုပြီး ၂ ခေါက်ဆို တယ်။ credit လဲ မပေါ တော့ ပထမ ဟာဖျက်လိုက်ရတယ်။ နှစ်ခုလုံး ကောင်း ပါတယ်။ ကိုဖီးတာလဲ ဦးချစ်ဆွေနောက်တပုဒ်ဆိုအုန်းလေ။ မျက်စေ့ဖွင့်ပြီး မအိပ်ဘဲ နားထောင်ရအောင်လို့။
ဗျို့ကိုတော တို့ကိုတာ တို့ …နောက်၁ခါ ကြိုးစားထားတယ်….ဝေဖန်ပေးပါဦး…ကျေးဇူးအထူး……
Greyboard ဖြစ် အောင် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ တော်တယ်ဗျာ။ အဆိုကိုပြောတာ။ *****